UJohansson wophula izulu nomhlaba kule foto intsha | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iimitha zesikwere ezili-17 zesipili salo mfanekiso uqhekeza izulu nomhlaba kubini
U-Erik Johansson unayo idlulise amatyeli aliqela ngebhlog kwaye ungomnye wabo bathwebula iifoto abafuna ukujonga imeko echaphazela imeko-bume ukusishiya simangalisiwe yiyo yonke into ehamba ngengqondo yakhe kunye nobuchule bokuyibamba kuthotho lweziganeko ezithandekayo eziza kuhamba zijikeleze umhlaba, kanye njengokuba ngale migca.
Kukwakhona kwakhona ukuba sinethuba lokubonisa umsebenzi wakhe omtsha kunye neprojekthi enezipili njenge «iibrashi». Kwaye ikukuba abekho mbalwa, kodwa Iimitha ezili-17 zesikwere lulwandiso Kuzo zonke izibuko ozibeka ngokufanelekileyo ukubonelela ngenye indlela okanye ujonge phambi kwefoto yakho.
Lo yayingumsebenzi wokugqibela owenzekileyo kule migca isuka kuJohansson. Uhlobo lwakhe olungenakuphikiswa analo njengemishini enkulu ingqondo yethu engathandabuzekiyo Phambi kwento ayibonayo ekhangela obo buqhetseba bungenakulungiseka ebusweni bethu xa sibeka iliso lethu kwinto entsha yobugcisa ngendlela yemifanekiso engaqhelekanga kunye noyilo olukhulu.
Un inkosi yokukhohlisa kubugcisa Kwaye ngeli xesha kumthathe iinyanga ukwenza kunye nokusebenzisa ngaphezulu kwe-17 yeemitha zesikwere zezibuko. Ukufota kusetyenziswa zombini iziphumo zokwenyani kunye nokuhlelwa kweefoto ukuvelisa iziphumo zokugqibela ezibonakala ngathi umhlaba wahlulwe kubini ukusuka ngokuthe nkqo ezulwini nasemhlabeni.
Kwiprojekthi yakhe yokugqibela, u-Erik wagqiba ukufota imifanekiso yevidiyo ukubonelela ngenkangeleko yakho kunye nokuqonda amava akho obugcisa. Njengoko watshoyo, wayecinga ukuba kumnandi ukwabelana ngenkqubo kunye nokubonisa ukuba mkhulu kangakanani umsebenzi emva kwala maqhekeza.
Unayo ividiyo apha apha ukuze uxakwe ngumnqweno weli gcisa lokukhohlisa ifoto eya kuthi ngokuqinisekileyo isishiye simangalisiwe kwiprojekthi yakhe elandelayo esiza kuyizisa kule migca.
Unayo iwebhusayithi yakho, facebook wakho y I-instagram yakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Iimitha zesikwere ezili-17 zesipili salo mfanekiso uqhekeza izulu nomhlaba kubini
Iintyatyambo ezingama-30.000 zinqunyanyisiwe kwisilingi yale gadi ikhethekileyo
Izibane ezingama-50.000 zokuguqula intlango ibe yintsomi